Akụkọ - Obere mgbanwe ise iji mee ka ihe ọkụkụ rụọ ọrụ nke ọma
Ọnụ ike iji rụọ ọrụ igwe eletrik karịrị afọ iri dịkarịa ala 30 ugboro mbụ ịzụta ego. Site na ike ike na-akpata maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndụ niile, Marek Lukaszczyk nke moto na onye na-arụ ọrụ ụgbọala, WEG, na-akọwa ụzọ ise iji melite arụmọrụ moto. Obi dị m ụtọ, mgbanwe na osisi ekwesịghị ịbụ nnukwu iji nweta ego. Ọtụtụ n'ime mgbanwe ndị a ga-arụ ọrụ na akara aka gị na akụrụngwa dị ugbu a.
Ọtụtụ igwe eletriki eletriki eji eme ihe na-arụ ọrụ dị ala ma ọ bụ na ha ezughi oke maka ngwa ahụ. Ihe mbipụta abụọ a na - ebute moto na - arụ ọrụ karịa ka ha kwesiri, na - eji ike karịa na usoro. N'otu aka ahụ, enwere ike ịbụ na enwetaralarị obere igwe ochie ugboro ole na ole n'oge mmezi, na-ebelata arụmọrụ ha.
N'ezie, ọ na-eme atụmatụ na a moto ida otu abụọ na abụọ arụmọrụ mgbe ọ bụla ọ na-rewound. N'ihi na ike oriri maka pasent 96 nke ngụkọta ndụ okirikiri nke a moto, na-akwụ ụma maka a adịchaghị arụmọrụ moto ga-eme na nloghachi na ego karịrị ya lifespan.
Ma ọ bụrụ na moto ahụ na-arụ ọrụ, ma ọ nọwo na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ iri afọ, ọ ga-efu nsogbu nke ịkwalite ya? Na nri soplaya, nweta nkwalite usoro adịghị akpaghasị. Oge edepụtara tupu oge eruo na-eme ka ọnụọgụ ọkụ na-arụ ngwa ngwa na obere oge. Chọ ịchọta akara ụkwụ nke ụlọ ọrụ na-enyere aka ịhazi usoro a, dịka nhazi ụlọ ọrụ agaghị achọ ịgbanwe.
O doro anya, ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ narị motọ na ngwa gị, ọ gaghị ekwe omume iji dochie ha n'otu oge. Zube ndị moto enwetara azụ na mbido ma hazie usoro ihe eji edochi ihe karịrị afọ abụọ ma ọ bụ atọ iji gbochie nnukwu oge ịkwụsị.
Ngosipụta arụmọrụ arụmọrụ
Iji mee ka motọ na-arụ ọrụ nke ọma, ndị njikwa ihe ọkụkụ nwere ike iwunye ihe mmetụta sensọ. Site na metrics dị mkpa dị ka ịma jijiji na ọnọdụ elekere na-enyocha na ezigbo oge, nke ewuru na nyocha mmezi amụma ga-amata nsogbu n'ọdịnihu tupu ọdịda. Na ihe mmetụta dabeere na ngwa moto data na-amịpụtara ma zigara ya na ama ma ọ bụ mbadamba. N'ime Brazil, otu ụlọ ọrụ na-emepụta ihe eji teknụzụ a na injin na-ebugharị igwe anọ na-agagharị agagharị. Mgbe ndị ọrụ ndozi natara ozi na otu nwere ọkwa vibration dị elu karịa ọnụ ụzọ a na-anabata, nchekwube ha dị elu nyeere ha aka idozi nsogbu ahụ.
Enweghị nghọta a, mmechi ụlọ ọrụ na-atụghị anya ya nwere ike ibilite. Mana kedụ ebe nchekwa ego dị n’elu edemede ahụ? Firstly, ụba vibration bụ ụba ume ojiji. Integratedkwụ ụkwụ gbadara agbagọ na igwe na-agbasi mbọ ike dị ezigbo mkpa iji mekwaa mkpọtụ. Site na idozi arụmọrụ na-abụghị nke kachasị ngwa ngwa, ike mebiri emebi ka edebe opekempe.
Nke abuo, site na igbochi ụlọ ọrụ mmepụta ihe zuru ezu mechie, ikike dị elu dị elu iji malitegharịa igwe niile achọghị.
Wụnye ndị na-ebido nro
Maka igwe na moto na-anaghị agba ọsọ, ndị na-ahụ maka ihe ọkụkụ kwesịrị ịwụnye ndị nro dị nro. Ngwaọrụ ndị a na-ebelata ibu na ọnya na ụgbọ oloko ike na ọkụ eletrik nke igwe ugbu a n'oge mmalite.
Chee maka nke a dị ka ịnọ n'okporo ụzọ ọkụ na-acha uhie uhie. Mgbe ị nwere ike ịdakwasị ụkwụ gị na pedal gas mgbe ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ị maara na nke a bụ ụzọ na-adịghị mma ma na-arụsi ọrụ ike na-akwọ ụgbọala - yana dị egwu.
N'otu aka ahụ, maka akụrụngwa akụrụngwa, ịmalite nwayọ nwayọ na-eji ume dị obere ma na-ebute obere nrụgide n'ibu na moto na osisi. N'ime ndụ nke moto, a adụ Starter na-enye na-eri ego ekewet belata ume ụgwọ. Softfọdụ ndị nro dị nro enwewo ike na-akpaghị aka. Odiiri maka ngwa compressor, onye di nro na-ekpe ikpe choro ma na-edozi ya dika nke kachasi.
Jiri ngwa ọsọ na-agbanwe agbanwe (VSD)
Mgbe ụfọdụ a na-akpọ ya dị ka ihe na-agbanwe agbanwe (VFD) ma ọ bụ draịva ntụgharị, VSD na-agbanwe ọsọ nke igwe eletrik, dabere na ngwa achọrọ. Na-enweghị njikwa a, usoro ahụ na-eme mkpọtụ mgbe achọrọ obere ike, na-achụpụ ike lara n'iyi dị ka okpomọkụ. Dịka ọmụmaatụ, na ngwa ngwa ofufe, VSD na-ebelata ikuku dị ka ihe achọrọ, kama ịbelata ikuku ahụ naanị mgbe ọ ka nwere ikike kachasị.
Ikpokọta a VSD na a super-adịchaghị arụmọrụ moto na belata ike akwụ ụgwọ ga-ekwu maka onwe ha. Na ngwa ngwa ụlọ elu dị ka ihe atụ, iji W22 IE4 super premium motor with a CFW701 HVAC VSD
Ọ bụ ezie na iwu dị ugbu a kwuru na a ga-eji motọ IE2 na VSD, nke a esiri ike ịmanye gafee ụlọ ọrụ. Nke a na-akọwa ihe kpatara ụkpụrụ ndị a ji esiwanye ike. Ka ọ dị na Julaị 1, 2021, motọ atọ ga - agbaso ụkpụrụ IE3, agbanyeghị mgbakwunye VSD ọ bụla.
Ngbanwe 2021 na-ejidekwa VSD na ọkwa dị elu, na-ekenye ọkwa ngwaahịa IE ngwaahịa a. A ga-atụ anya ka ha zute ọkọlọtọ IE2, ọ bụ ezie na ụgbọala IE2 anaghị anọchite anya arụmọrụ dabara adaba nke igwe IE2 - ndị a bụ sistemụ dị iche.
Jiri VSD zuru oke
Wụnye VSD bụ otu ihe, iji ya zuru oke bụ ihe ọzọ. Imirikiti VSD jupụtara na atụmatụ bara uru nke ndị njikwa akụ amaghị. Ngwa mgbapụta bụ ezigbo ihe atụ. Njikwa mmiri nwere ike ịbụ ọgba aghara, n'etiti leakages na obere mmiri ọkwa, enwere ọtụtụ ihe nwere ike ịgahie. Njikwa njikwa na-enyere ndị ọrụ aka iji rụọ ọrụ nke ọma dabere na mmepụta chọrọ yana nnweta mmiri.
Nchọpụta ọkpọkọ na-akpaghị aka na VSD nwere ike ịchọpụta mpaghara mmiri mmiri na-agbanwe arụmọrụ ya. Ọzọkwa, akọrọ mgbapụta nchọpụta pụtara ma ọ bụrụ na mmiri na-agba si, na moto na-akpaghị aka deactivated na a akọrọ mgbapụta njikere na-agbala. N'ọnọdụ abụọ ahụ, moto ahụ na-ebelata ike ya mgbe obere ume achọrọ iji jikwaa akụnụba dịnụ.
Ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ motọ dị na ngwa mgbapụta, akara mgbapụta jockey nwekwara ike ibuli ojiji nke igwe dị iche iche. O nwere ike ịbụ na ihe achọrọ chọrọ naanị obere igwe eji arụ ọrụ, ma ọ bụ ngwakọta nke obere na nnukwu moto. Mgbapụta Genius na-enye mmụba ka ukwuu iji jiri ezigbo igwe eletrik maka ọnụọgụ ego enyere.
VSD nwere ike ịrụ ọrụ nhicha nke igwe na-akpaghị aka, iji hụ na a na-emepu ihe na-aga n'ihu. Nke a na-eme ka moto ahụ nwee ọnọdụ kachasị mma nke nwere mmetụta dị mma na arụmọrụ ike.
Ọ bụrụ n ’inweghị obi uto ịkwụ ụgwọ ugboro iri atọ moto na ụgwọ ike ihe karịrị afọ iri, oge eruola ịme ụfọdụ n’ime mgbanwe ndị a. Ha agaghị eme n'otu ntabi anya, mana atụmatụ ebumnuche nke na-eleba anya n'ihe mgbu gị na-enweghị isi ga-eweta uru arụmọrụ arụmọrụ dị oke mkpa.